President Buteflika nke Algeria enyela ndị nnupụisi ahụ ohere, ọ gaghị agba ọsọ maka oge nke ise — Steemit
President Buteflika nke Algeria enyela ndị nnupụisi ahụ ohere, ọ gaghị agba ọsọ maka oge nke ise
ohuru (61) in igboti • 11 days ago
Onyeisi Algeria, Abdalaziz Buteflik mara ọkwa mgbe a na-eme mkpesa nke uka na ya agaghi agbagharia dika isi nke ala. N'otu oge ahụ, ọ kwụsịrị ntuli aka maka April 18 wee kwe nkwa na ọ ga-agbanwe na ngọngọ nke gọọmenti na mgbanwe nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba. Ka ọ na-erule ngwụsị afọ, ọ ga-eweta usoro iwu nke ndị mmadụ kwesịrị ikwenye na nzaghachi. Otu ikike nke ọrụ ya ga-eme atụmatụ atụmatụ ntuli aka ọhụrụ chọrọ ka a kpọọ ya. Ozugbo o kwusịrị mkpebi Buteflik, Prime Minista Ahmad Uyahja kwupụtara ịhapụ ya. Minista ọhụrụ nke ime obodo, Núreddín Bedúí, ga-eduga gọọmentị.
Buteflika, onye dị afọ 72 bụ onye na-arịa ọrịa strok n'afọ 2013, na-arịọ maka oge nke ise ya n'April. Ma nke a bụ ọgbọ na-enweghị atụ nke protests na February. Ọtụtụ iri puku mmadụ gara n'okporo ámá kwa ụbọchị.
N'akụkụ ndị ahụ na-eme mkpesa ahụ, ọtụtụ ndị òtù Buteflik Government Liberation Front (FLN) sonyeere na izu gara aga, bụ ndị kwụsịrị ọrụ ha. N'ihe banyere ikpe ziri ezi nke Buteflik, ihe karịrị otu puku ndị ikpe jụrụ ilekọta usoro nhoputa ndi ochichi. Onye isi ndị ọrụ nke ndị agha Algeria kwukwara na ndị agha na ndị agha nwere otu ọhụụ banyere ọdịnihu nke mba ahụ.
Onyeisi Buteflika nyere otu nkwupụta izu gara aga bụ nke ọ dọrọ aka ná ntị maka ọgba aghara nke nwere ike ịmeghachị Algeria. O buru ụzọ gbalịa ime ka ọnọdụ ahụ dị jụụ na nkwa ahụ bụ, na ọ bụrụ na a ga-eme ntuli aka, iwu ahụ agaghị ejide oge niile. Mgbagwoju anya ugbu a na mba ahụ, nke bụ isi na-emepụta mmanụ na gas, bụ nke kachasị ukwuu kemgbe oge a na-akpọ Arab Spring of 2011.
O bu onye mbu choputara Buteflika n'afo 1999 ma kwuo na ya gwuro agha karia afo iri n'etiti ndi ochichi na ndi agha ndi Islamist, na -apu ihe di ka mmadu 200,000.
Ọ gwaghị ndị mmadụ okwu kemgbe ọrịa strok ahụ na 2013, ọ gwara ya banyere mkpebi ya ka ọ ghara iguzo na nkwupụta nke onyeisi oche ahụ.
11 days ago by ohuru (61)
Congratulations @ohuru! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
This post has received a 50.85 % upvote from @boomerang.